Global Voices teny Malagasy » Meksika: Mitantara ny Tsiambaratelony ao Amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy » Print
Meksika: Mitantara ny Tsiambaratelony ao Amin'ny Twitter
Voadika ny 21 Mey 2017 5:19 GMT 1	 · Mpanoratra Issa Villarreal Nandika (fr) i Pauline Ratzé, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zavakanto & Kolontsaina
Fantatr'ilay mpanoratra, Rafa Saavedra, tsara ny miafinafina rehetra amin'ny kolontsain'ilay tanàna meksikàna Tijuana, any amin'ny sisintany iraisany amin'i Etazonia. Ny tsirairay amin'ireo tetikasa elektronika ataony dia resaka fiainana literatiora avokoa. Namoaka tantara fohy sy tetikasa vitsivitsy izy ao amin'ny bilaoginy Crossfader Network  [amin'ny teny espaniola] ary mpampiasa mavitrika ny Twitter, @rafadro , izay ampiasainy ho toy ny loharanon'ny asa famoronany. Ny tetikasany farany amin'ny resaka literatiora sy elektronika, nomeny lohateny hoe Soweird, dia mampifangaro ny tantara bitika foronina, ny tsiambaratelo ary ny Twitter.
« Tokantranoko ny Crossfader Network, toerana iray anangonako ny eritreritro, toerana hakàko sary an-tsaina ireo tontolo tonga lafatra ary izaràko ny fandrosoan'ireo tetikasako, hoy i Rafa mitantara tao anaty tafa nifanaovana tamin'ny imailaka. Tokantranon'ny tokantena ho ahy ny Twitter izay tsy mitsahatra ny misy fety, tsy mitsahatra ny misy namana sy mpamandrika ny zavatra ataoko, loharanom-baovao (azo ambara ho) tsy mbola nivoaka na taiza na taiza, laboratoara iray mikorontana, taharo marihitry ny esoeso sy ny fahamatorana ao anaty tarehintsoratra 140 ».
Tamin'ny Jolay 2009 lasa iny, nangatahany ireo mpamandrika azy maherin'ny 200 tao amin'ny Twitter mba hizara izay tsiambaratelo goavana any amin'izy ireo (na farafaharatsiny izay tsambaratelo keliny, hoy izy niòefitra taty aoriana), mba ho fandraisana anjara amin'ny famoronana lahatsoratra iray misy mpitantara marobe. Niaraka tamin'ireo tsiambaratelo maherin'ny 40 voarainy tamin'ny Twitter no teraka ny Soweird,  fifangaroanà zavatra noforonina sy ny tena marina tao anaty fizaràna ireo fotoana 22 niresaka firaisana ara-nofo, henatra ary zavatra ratsy natao. Ny tantara farany, afaka hita ao amin'ny bilaoginy amin'ny teny espaniola sy anglisy , dia tokony ho ao anatin'ny gazetiboky miresaka literatiora El Perro  [espaniola] no hivoaka.
Ao anatin'ny ampahan'ny Soweird natokana hiresahana lohahevitra momba ny fianakaviana, tsiambaratelo tahaka ity manaraka ity no azo vakiana:
11. Nohitsakitsahan'i Mauritz tamin'ny vadin'ny namany akaiky indrindra ny sipany. Rehefa nisaraka ireto farany, ilay rahalahiny no novadian-drasipa. Amin'izao fotoana izao, tsy vitany ny hanazava amin-drasipa hoe toa tsy ho efany ny hanatrika ny fivoriam-pianakaviana satria mety hiteraka tabataba ny amin-dry zareo.
Anatin'ny ampahany natokana ho an'ireo zavatra ratsy natao, izao no azo vakiana:
17. Tamin'ny alàlan'ireo taratasimbola nalefan'ny rainy mba handoavana ny saran'ny fianarany amin'ny anjerimanontolo tsy miankina, izay tsy nodiavin'ny tongony velively, nanomboka nividy tantara an-tsary i Elwin. Avy eo, nangalatra ary nandany vola be tokoa tamin'ilay asany voalohany dia niteny fa hoe nisy nanafika. Indray mandeha, nila zavatra nokarakaraina tao amin'ny biraon'ny lapan'ny tanàna izy, nitaky volabe tamin'ilay orinasa niasany izy mba handemena ilay mpiasa tao ary laniny tamin'ny fisotroana labiera ny antsasany.
Araka ny lazain'i Rafa Saavedra, ny fanoratana bilaogy bitika dia lasa lavitra noho ny fitantarana fotsiny ireo antsipirihany tsy misy dikany: « Ao amin'ny Twitter, matetika ny olona no mibaboka zavatra kivalavala tsy eritreretina akory, mampihomehy sy mahamenatra. Misy mihitsy aza tenifototra iray #yoconfieso  [esp.] (« mibaboka aho). Araka izany, raha tokony ho ny tsiambarateloko no aborako, nanapaka hevitra aho fa hahaliana kokoa ny mitrandraka ny tsiambaratelon'ny hafa. Nanontany tena aho hoe hatraiza no ho sahin'izy ireo haleha, ahoana no hanamarihako ny fahasamihafàn'ny sary izay nanànako momba ireo mpampiasa Twitter, raha mitaha amin'ilay sary omeny ny mpanjohy azy. Fijery vetavetan'ny mpanoratra 2.0 »
Na tsy afaka mamboraka ny tena anaran'ireo mpanjohy azy aza izy, lazain'i Rafa Saavedra toy izao ny momba ireo mpanjohy azy nirotsaka tamin'ilay tetikasany : « Misy vahiny vitsivitsy, olona eo anelanelan'ny 19 sy 40 taona. Araka ny hita ao anatin'ny lahatsoratra, nosokajiana ho valo ireo tsiambaratelo (firaisana ara-nofo, henatra, sipa fahiny, fianakaviana, zavatra ratsy natao, fahafinaretana tsy nahasoa, fakampanahy ary namana fahiny). Ny ankamaroan'ireo tsiambaratelo dia tafiditra ao anatin'ny sokajy ‘fianakaviana, firaisana ara-nofo, henatra sy fakampanahy’. Tena faran'izay mandratra fo ny sasany amin'ireo tsiambaratelo. »
Tsy ny Soweird no voalohany tamin'ny tetikasan‘i Rafa Saavedra nampihaonany ny Twitter sy ny literatiora. Tamin'ny 2007, izy no tomponandraikitra taminà tetikasa iraisana Microtxts, izay nahangonana tantara kely 238 noforonina, tamin'ny fampiasàna ny anarana hoe @microtxts  [espaniolal] ary navoakan'ireo trano famoahamboky meksikàna Replicante [es]  sy Balbuceo. « Nanasa namana maro aho, mpanao gazety, mpianatra amin'ny resaka fifandraisana, ary ireo olona noheveriko fa mety ho liana amin'ny famoronana lahatsoratra bitika tsy itononana anarana ary manao andiany. Ny fotokevitra ijoroan'ilay atrikasa dia ny hoe: ny manoratra dia mizara. Tany ampiandohana, tsy takatr'izy ireo tsara ny fahafaha-mihetsiky ny Twitter, na ny dingan'ny fanoratana sy ny tsy fitononana anarana. Saingy, tratra ihany ny isa 100 ho an'ny mpandray anjara,» hoy ny fanehoankeviny tanaty tafa iray.
« Ankehitriny, tsy azo eritreretina intsony ny fiainako tsy misy aterineto, tsy misy tambajotra sosialy, tsy misy ireo zavatra aterany, hoy izy manazava, fa etsy andaniny koa, azoko atao ny manapika ny solosaiko sy miaina tsy amin-tahotra ny fiainako. Ireo fiainana virtoaly, ny haino aman-jery elektronika sy ny fampiasana azy ireny dia sady sisintany misy fetra na tsia saingy azo ihoarana. Toy ny fiainako ao Tijuana ihany. ».
Ho fanaovana veloma, “fahamarinana” iray momba azy no zarain'i Rafa Saavedra anaty tarehintsoratra 140 (na raha kely indrindra):
« Tsy naniry ny ho lasa olona hafa ankoatra izao maha-izaho ahy izao velively aho, kanefa miovaova matetika aho ary indraindray dia sahirana mamantatra hoe izay àry aho. Eny, tena fifanoheran-javatra io ».
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/21/100277/
 Crossfader Network: http://crossfadernetwork.wordpress.com/
 nangatahany ireo mpamandrika azy maherin'ny 200 tao amin'ny Twitter : http://twitter.com/rafadro/status/2212608608
 El Perro: http://elperro.com.mx/